Torolàlana momba ny varotra an-tserasera | Martech Zone
Torolàlana momba ny varotra amin'ny Internet i Noob
Alakamisy, Septambra 29, 2011 Alakamisy Oktobra Oktobra 27, 2011 Douglas Karr
Na dia milaza aza ity infographic ity fa a noob torolàlana, raha ny tena izy dia mijery akaiky ny paikady tafiditra amin'ny famolavolana paikady marketing anaty Internet. Ireo fantsona voalaza dia misy ny marketing amin'ny mailaka, ny fitarihana loholona, ​​ny fikarohana organika, ny karoka karama, ny media sosialy, ny fanatsarana ary Analytics. Ny infographic dia mahavariana - ary lisitra tsara ho an'ny mpivarotra an-tserasera rehetra.
Ny hany fidirana manjelanjelatra avy amin'ny sary dia paikady fifandraisam-bahoaka. Ny lakilen'ny fototry ny fisian'ny fisian'ny Internet tsara dia eken'ny namanao. Orinasa fifandraisam-bahoaka toa anay, Ditto PR, dia tompony amin'ny fahazoana tombony amin'ny famoahana sy ny maha-izy azy.
Unbounce - Ny DIY Landing Page Platform
Ny infographic dia novolavolain'i Unbounce. Unbounce dia serivisy fampiantranoana irery izay manome ny mpivarotra manao fikarohana karama, dokam-barotra amin'ny banner, mailaka na marketing amin'ny media sosialy, ny fomba tsotra indrindra hamoronana, hamoahana & hizaha pejy fananganana manokana momba ny fampiroboroboana tsy mila IT na mpamorona.
D & B360 dia mahatonga ny CRM hiasa mahery kokoa
Facebook dia Trano Frat, Google+ a Sorority
1 Oktobra 2011 à 10:34
Iray amin'ireo infografika tsara indrindra hitako tato ho ato. Fampahalalam-baovao mahavariana nampidirina tao anaty infografika tokana, satroka ho an'ny mpamorona.
1 Oktobra 2011 à 10:48
Nieritreritra toy izany koa aho ry Robert! Na dia iriko aza fa misy fomba ahafahana mamaky azy io amin'ny habe kely kokoa.
2 Oktobra 2011 à 7:37
Saripika mahafinaritra! Tiako ny handeha amin'ny mpanjifa rehetra amin'ny dingana! Fomba aingam-panahy hijerena ny zava-drehetra ilaina mba hanombohana ny fanosehana ara-tsosialy.